जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि 🥇 अनुयायी ▷ 🥇 भन्छ
जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ
आज, विश्वमा निरन्तर अन्तर्क्रिया र सामाजिक नेटवर्कको प्रयोगको कारण ठूलो मांग छ। यी साथीहरूसँग कुराकानी गर्न, भावनाहरू व्यक्त गर्न र समुदायसँग साझेदारी गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन तपाईसँग वास्तवमै सम्बन्धित छ। यसैले, जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ यो राम्रो संकेत होईन।
सामाजिक नेटवर्क को उपयोग मा यो मांग दिईएको, यो बिल्कुल आवश्यक छ जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ एक समाधान छिटो खोजी गरिन्छ ताकि प्लेटफर्मको सञ्चालन प्रभावकारी छ। र त्यो हो, इन्स्टाग्राम यो पछाडि छोड्दै सबैभन्दा प्रख्यात सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक बन्न गइरहेको छ फेसबुक y twitter, यसको उत्कृष्ट सुविधाहरू र कार्यहरूको लागि धन्यवाद छ जुन प्रयोगकर्ता अनुभवलाई अधिक रमाइलो बनाउँदछ।
इन्स्टाग्राम विश्वको सबैभन्दा ठूला र प्रख्यात प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो, मुख्य रूपमा यसको मोबाइल अनुप्रयोगको लागि बाहिर खडा। यसको लागि धन्यबाद, प्रयोगकर्ताहरूले वास्तविक समयमा छविहरू र भिडियोहरू साझा गर्न सक्दछन्, असंख्य अभिनव र रमाईलो फोटोग्राफिक प्रभावहरू लागू गर्दै। पछि, यी छविहरू प्लेटफर्म वा अन्य सामाजिक नेटवर्कमा साझेदारी गर्न सकिन्छ।
खास गरी स्मार्टफोनबाट प्रयोग गर्नको लागि डिजाइन गरिएको; इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई फोटो र छोटो अवधिको भिडियोमा लागू हुने विभिन्न उपकरण प्रदान गर्दछ। हाल, डेस्कटप संस्करणको लागि अनुप्रयोग पनि छ, यद्यपि यो मोबाइल अनुप्रयोगको तुलनामा धेरै सीमित छ।
यसले तपाइँलाई चासो दिन सक्छ: इन्स्टाग्राम के हो र इन्स्टाग्रामले कसरी काम गर्दछ?
सबैभन्दा बढि सुविधाहरू मध्ये तपाईंले इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा फेला पार्नुभयो:
विकल्प खोजबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई पछ्याउने।
वास्तविक समयमा छविहरूको दृश्य।
फोटो र भिडियोहरूको संकलन अन्वेषण गर्नुहोस्।
तपाईंको निजीकृत स्टिकर बनाउनुहोस्।
उपकरण सुधार र स्थिर अपडेटहरू।
प्रयोगकर्ता सुझावहरू हेर्नुहोस्।
अब, सबै कुरा यति ठिक छैन। धेरै अवसरहरूमा, प्लेटफर्मले समस्याहरू प्रस्तुत गर्‍यो र हामी अवलोकन गर्‍यौं जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ। यो त्रुटि सामान्यतया धेरै अवसरहरूमा देखा पर्दछ, यो प्रणाली अवयवहरूमा विफलता वा आफ्नै प्लेटफर्मको पतनको कारणले हुन्छ। जहाँसम्म, त्यहाँ धेरै समाधानहरू छन् र हामी यहाँ तिनीहरूलाई व्याख्या गर्दछौं।
जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भनेको छ?: यहाँ फेला पार्नुहोस्!
ठीक छजब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ? धेरै जसो केसहरूमा, यो त्रुटि प्रायः देखिन्छ जब तपाईं इन्स्टाग्राममा लग इन गर्नुहुन्छ वा क्रमशः पृष्ठ लोड गर्दा। यो सामान्यतया कनेक्टिभिटी समस्याहरूसँग सम्बन्धित छ, वा केहि केसहरूमा इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा आन्तरिक समस्याहरू छन्।
यद्यपि यो सामाजिक नेटवर्क विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात र प्रयोग गरिएको प्लेटफर्म मध्ये एक हो; जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ आतंक देखा पर्छ। अर्कोतर्फ, हामी कहिले पनि पूर्ण रूपमा पक्का हुन सक्दैनौं कि यदि गल्ति प्लेटफर्म ड्रप गरिएको तथ्यको कारणले हो, वा यदि यसको विपरित हाम्रो मोबाइल असफलता प्रस्तुत गर्दैछ। त्यसकारण, त्यहाँ हाल म्याकेनिमेसनहरू छन् जुन तपाईंलाई जाँच गर्न अनुमति दिन्छ कि इंस्टाग्राम असफल भइरहेको छ।
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ यो खराब इन्टरनेट जडानको कारणले गर्दा समस्या भएको हो। यद्यपि यहाँ यस असफलताको केहि कारणहरू छन्:
खराब इन्टरनेट जडान।
प्रणालीमा भाइरसहरूको उपस्थिति।
IP ठेगाना समस्याहरू, संचार त्रुटिहरूको कारण।
जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ?: समाधानहरू!
एक पटक सम्भावित कारणहरू स्पष्ट पारिए जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ, हामी समाधानको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन तपाईंले यस इन्स्टाग्राम त्रुटि सच्याउनको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ। यो नोट गर्नु पर्दछ कि धेरै प्रक्रियाहरू धेरै हदसम्म तपाईको स्मार्टफोनमा निर्भर हुन्छन्, यद्यपि सबै भन्दा धेरै त्यहि ढाँचा अनुसरण गर्दछन्।
त्यसो भए, तल हामी इन्स्टाग्रामको सहि सञ्चालन पुनर्स्थापित गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी समाधानहरू वर्णन गर्नेछौं। ध्यान दिनुहोस्!
Instagram इन्स्टाग्राम त्रुटिमा स्मार्टफोन पुनःसेट
एक धेरै नै आधारभूत समाधान र एउटा जुन धेरै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूको दिमागमा आउँदछ जुन तपाईंको स्मार्टफोन पुनः सुरु गर्नु हो। यद्यपि पहिलो नजर मा यो सरल र अर्थहीन देखिन्छ; जब उपकरणले यसको प्रक्रियाहरू र सेवाहरू पुनः सुरु गर्दछ - इन्स्टाग्राम सहित - तिनीहरू अद्यावधिक हुन्छन् वा फेरि सुरू हुन्छन्। यो क्षणमा पहिलो विकल्प हो जुन इन्स्टाग्रामले विफलताहरू प्रस्तुत गर्दछ, एक धेरै व्यावहारिक हो।
यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, तपाईंले आफ्नो उपकरण सक्रिय गर्नुपर्दछ यदि यसलाई रोकिएको छ भने। त्यसो भए तपाईले दुई सेकेन्डको लागि पावर बटन थिच्नु पर्छ र समाउनु पर्छ; यो उपकरणको छेउमा अवस्थित छ। एकचोटि रिस्टार्ट प्रतीक देखा पर्दा तपाईंले प्रक्रियाहरूका लागि प्रेस गर्नुपर्नेछ। कम्प्युटर पुन: सुरु गरेपछि, पहुँच पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र ईन्स्टाग्राम सहि ढ works्गले काम गर्दछ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्।
Network नेटवर्क कनेक्टिविटी जाँच गर्नुहोस्
जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ यो सामान्यतया कनेक्टिविटी विफलता, वा नेटवर्क को सञ्चार प्रोटोकलमा त्रुटिहरूको कारण हो। त्यसकारण हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले आफ्नो इन्टर्नेट जडान जाँच वा मान्य गर्नुपर्दछ।
धेरै जसो केसहरूमा, इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग एक वाइफाइ जडान मार्फत स्मार्टफोनमा प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ, यो एक संकेत जस्तै त्रुटि को लागी संवेदनशील बन्छ, संकेत शक्ति, शक्ति, कभरेज र अन्य आन्तरिक र बाह्य सर्तहरू। तपाईं यो समाधान गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले स्मार्टफोनबाट वाइफाइ जडान असक्षम गर्नुपर्नेछ र मोबाईल डाटा खोल्नुपर्नेछ कारण जाँच गर्नका लागि कारण त्रुटि कनेक्शनको कारण हो।
अब, यदि तपाई मोबाईल डाटा चलाउन जारी रहनुभयो र त्रुटि रहिरह्यो भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले मोडेम जडान प्रमाणित गर्नुहोस्, वा एकछिनको लागि यसको डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्। धेरै अवधिको समयावधि पछि यसलाई पुन: जडान गर्नुहोस् र इन्स्टाग्राम जडान परीक्षणहरू फेरि गर्नुहोस्।
· मोबाइल मिति र समय सेटिंग्स
यो प्रयोगकर्ताहरूले कम ध्यानमा राखेका सुविधाहरू मध्ये एक हो, किनकि उनीहरूले विचार गर्छन् कि यसले अनुप्रयोगको संचालनमा कुनै नकारात्मक असर पार्दैन। जहाँसम्म, यदि तपाईं गलत रूपमा आफ्नो स्मार्टफोनमा समय र मिति सेट गर्न गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईं तपाईंको मोबाइलमा सिnch्क्रोनाइजेसन प्रक्रियालाई असर गर्ने छ, तिनीहरूलाई विफल बनाउन र यस्ता त्रुटि उत्पन्न गर्न।
त्यसकारण, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाई आफ्नो स्मार्टफोनमा मिति र समय जाँच गर्नुहोस्। यो कसरी गर्ने यो डेटा जाँच गर्न, वा यदि आवश्यक छ भने यसलाई एन्ड्रोइड उपकरणमा कन्फिगर गर्नुहोस्, तपाईंले सेटिंग्स र विन्डोमा देखा पर्छ कि तपाईंले "उन्नत सेटिंग्स" खोज्नुपर्नेछ।
यस सेक्सनको पत्ता लगाउने बखत तपाईले यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ, "मिति र समय" विकल्प खोज्नु पर्छ र यसको सेटिंग्स पहुँच गर्नुहोस्। त्यहाँ एकचोटि, तपाईंले सक्रिय वा "स्वचालित मिति र समय" विकल्प छान्नुपर्नेछ। यसले तपाईंको मोबाईलको मिति र समयलाई गुगलसँग समक्रमण गर्न अनुमति दिनेछ।
यदि इन्स्टाग्राममा अज्ञात नेटवर्क त्रुटि देखा पर्न जारी रह्यो भने, तपाईंले "स्वचालित मिति र समय" विकल्प अनचेक गर्नुपर्नेछ, "सेट मिति" विकल्प चयन गर्नुहोस्4वा5वर्ष भन्दा ठूलो मिति प्रविष्ट गरेर परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्। यदि यो इन्स्टाग्रामले समस्या बिना नै खोल्छ भने, तपाइँ फेरि कन्फिगरेसनमा जान सक्नुहुन्छ र फेरि "स्वचालित मिति र समय" विकल्प सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
Ache क्यास र इन्स्टाग्राम डेटा खाली गर्नुहोस्
यो सामान्य हो कि तपाईको स्मार्टफोनमा अनुप्रयोगको लगातार प्रयोगको साथ, क्यासमा विभिन्न जानकारी स is्कलन हुन्छ, जहाँ पहुँचको गति र अनुप्रयोगको प्रदर्शन सुधार गर्ने तत्त्वहरू राखिन्छन्। यद्यपि यो डाटाको स्ग्रहले अनुप्रयोगमा त्रुटिहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै अज्ञात नेटवर्क त्रुटि।
यसलाई रोक्न र एप्लिकेसन सहज रूपमा चल्नका लागि हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं यस क्याचलाई मेटाउनुहोस्, साथै डाटा पनि मेटाउनुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले आफ्नो मोबाईलको सेटिंग्समा जानु पर्ने हुन्छ, "भण्डारण" को लागी खोजी गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि "डाटा क्यास गरिएको" जानुहोस् यो विकल्प छनौट गर्नुहोस् र "स्वीकार्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटि काम गरिसकेपछि, जाँच गर्नुहोस् कि इन्स्टाग्राम सहि काम गर्दछ।
के तपाईं प्लेटफर्ममा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न जब इन्स्टाग्रामले अज्ञात नेटवर्क त्रुटि भन्छ?: अनुप्रयोग अपडेट गर्नुहोस्!
सुरक्षा कारणका लागि, साथै अनुप्रयोगहरूको राम्रो कामका लागि, अपडेटहरू अद्यावधिक राख्नु आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, तपाईंले जाँच गर्नै पर्दछ कि यदि इन्स्टाग्राममा अपडेटहरू पेन्डिंग छन् भने, यदि तिनीहरू स्वत: डाउनलोड हुँदैनन् भने।
यी अपडेटहरू हेर्नको लागि तपाई गुगल प्ले स्टोर अनुप्रयोगमा जानुपर्दछ, "मेरो एप्स र खेलहरू" मेनूको लागि खोजी गर्नुपर्नेछ र बाँकी रहेका अपडेटहरू देखाइनेछ। त्यस पछि तपाईले अनुप्रयोगलाई छान्नुपर्नेछ जहाँ तपाई अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ - यस अवस्थामा इन्स्टाग्राम - र प्रेस गर्नुहोस् "अपडेट" बटन क्रमशः।
इन्स्टाग्राम: यो डाउन छ कि भनेर कसरी थाहा पाउने?
हामी देख्न सक्छौं कि यस समस्या समाधान गर्न वर्तमानमा थुप्रै विकल्पहरू छन्। जहाँसम्म, गल्ति तपाईको मोबाइलबाट आएको छैन र त्रुटि लगातार रहिरह्यो भने, सम्भवतः इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। यस सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्न, त्यहाँ पृष्ठहरू छन् जुन सामाजिक नेटवर्कको सेवा स्थिति प्रमाणित गर्न जिम्मेवार छन्।
यी पृष्ठहरूको एक सरल अपरेशन छ र तपाईंलाई सूचित गर्नुहोस् यदि यो इन्स्टाग्राम हो भने तल छ। यो प्लेटफर्ममा केही त्रुटि द्वारा प्रभावित व्यक्तिको संख्या र वितरणको विश्लेषणको लागि धन्यवाद प्राप्त गरियो। सब भन्दा प्रख्यात विकल्प मध्ये हामी फेला पार्दछौं Downdetector। साथै, सेवा पतनको बारेमा गुनासोहरू फेसबुक र ट्विटर जस्ता प्लेटफार्महरूमा पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ।
जब Instagram प्रत्यक्ष हटाउँछ
जब इन्स्टाग्राम तपाइँले मनपर्दो हटाउनुहुन्छ?